Sida loo rakib Flash on PC / Mac / Android / iPhone / iPad
Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida loo soo dajiyo flash on your computer (Windows iyo Mac), qalabka Android iyo qalabka macruufka.
Qeybta 1: Ku rakib Flash kombiyuutarka
Qeybta 2: Ku rakib Flash telefoonka ah Android oo kiniin ah
Qeybta 3: Ku rakib Flash aad iPhone iyo iPad
Adobe Flash Player u baahan doontaa in la soo bixi haddii aad rabto inaad aragto websites badan kuwaas oo is-dhexgal oo ay leeyihiin animations. Users Mac karo si toos ah uga website-ka Adobes dejisan. Markaas waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo barnaamij ka hor waxaad bilaabi kartaa inaad isticmaasho badan ka mid ah website-yada. Hubi in aad computer la kulmi doonaa shuruudaha ciyaaryahan Flash ah.
1. Tag Adobe flash ku download, bogga hoos ayaa lagu muujiyey. Riix badhanka download taas oo aad ka arki kartaa. Markaas download bilaabi doonaa.
2. Marka download dhamaato, waxaad u baahan tahay in ay laba jibaaraan guji faylka download.
3. 3. Hubi in Flash Player rakibayo downloads si aad u computer. Haddii bar ku joojiyo ka hor inta uusan u dhaqaaqin waxa uu ku soo bixi celiyaan tallaabada 1. Haddii ay weli ma soo bixi tagaan si ay dhibta Flash player download.
4. Tani Flash Player suuqa kala muuqan doonaa.
5. Waxaad u baahan tahay si ay u bilaabaan rakibo, double-riix rakib Adobe Flash Player icon. Haddii aad aragto sanduuqa hadal weydiinaya in la furo rakibayo ah, guji Open.
6. Waxaad ku qortaa magacaaga user doortay iyo password in aad isticmaasho inaad gasho your computer.
7. Marka sanduuqan u muuqataa guji soo socda ee Flash Update ugu Player rabtid suuqa kala.
8. Haddii fariin qalad ah u muuqataa, xir fariinta.
9. Marka aad aragto fariin ah "Rakibaadda guulaysteen," guji Finish. Waxaad hadda ka furan kartaa biraawsarkaaga si aad u eegto websites sida aad si guul leh ku rakiban ayaa Flash Player.
On Android ah ma jiraan wax taageero rasmi ah flash hadda, sidaas ma ay ciidamo dheeraad ah ama taageero marka ay wax qaldamaan. Waxaad filan karo dhowr dhibaatooyinka xasilooni haddii aad isticmaalayso Android 4.2. Xasuuso inaad u dib-u-isticmaalka awood u ah ammaanka ka dib. Waxaad u baahan doontaa kiniin ah ama telefoon ah oo waddaa on Android 2.2 in 4.1. Waxaad ka eegi kartaa adigoo eegaya in goobaha aad - About phone / kiniin ah, oo waxaan arki doonaa halkaas ka haddii aad socon. Hubi in aad leedahay browser stock soo socda si chrome Google, Chrome ma taageeri doonaa Flash, oo waxaad u baahan doontaa si aad u hubiso barnaamijyadooda aad u internet ama browser. Helitaanka Flash waa u fududahay.
1. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad u sheegto qalab aad waa ok si loo soo dajiyo Chine oo laga helay ilo kale oo aan Google play. Waxaa jiri doona sanduuq ku calaamadeysan tahay il aan la garanayn oo laga helay goobaha - codsiyada Android 4. - Settings - ammaanka.
2. Download flash ee downloader codsiga Android aad telefoon ama kiniin. Waxaa faylka kala soo bixi doonaa Adobe.
3. hoos ugu soo jiid deegaanka wargelinta iyo faylka ka jaftaa si loo soo dajiyo. Si loo xaqiijiyo tuubada rakibi shaashadda soo socda.
4. Tag stock telefoonada biraawsarkaaga markii Flash la geliyo. Google chrome ma taageeri doonaa app cusub ee lagu rakibay.
5. Iyadoo Android 3.0 ama ka dib lagu daydo, waxaad tagtaan dalka menu, kuwaas oo saddex dhibcood ee soo socota si aad cinwaanka bar - settings- advanced- awood u tago fur. Dooro had iyo jeer on si ay awood Flash content, ama in ay la xushay si ay awood u doortay on baahida. Wixii Android 2.2 iyo 2.3 tagaan si ay menu - settings- sare, halkan waa meesha aad ka heli doontaa fursado awood.
6. Waa in aad diyaar u dhan si ay u isticmaalaan.
Marka waxa la shaqeeyo, uncheck ilaha aan la garanayn in aad telefoon ama kiniin ammaan ah.
Si aad u rakibto Flash on your iPad aad u baahan doontaa in aad JAILBREAK iPad. Raac tallaabooyinka hoose:
1. Waxaad u baahan doontaa si loo soo dajiyo OpenSSH. Open Cydia, taabashada 'raadinta tab' nooca in OpenSSH. Ku rakib Haddaba reboot aad iPad.
2. Waxaad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan aad iPad la your computer iyo hubi in aad horay u heysan Lugood orodka.
3. Download dibna loo soo dajiyo internetka duck u Mac ama WinSCP daaqado ka dibna ku qor faahfaahinta hoose si aad u gasho.
Server: Cinwaanka IP aad iPad. Settings - Wi-Fi ku qasbeysaa inuu Network Name -
Protocol: SFTP (Ssh Transfer File Protocol)
Hostname: Cinwaanka IP aad iPad. Dejinta Wi-Fi
User name: xididka
File frash.deb 4. Download ka eeg xiriirka hoose.
5. Waxaad tagtaa / var / xidid / warbaahinta buugga iyo in la abuuro gal ah oo lagu magacaabo Cydia. File ayaa kula odhan Auto dajiyo.
6. Waa in markaas Waxaad nuqul ka badan file Frash.deb in aad auto rakibi folder.
7. Marka aad aad u billaabeen aad iPad dhammeeyaan. Browse goobta wax ku salaysan Flash.
Si aad u hesho flash aad iPhone waa wax yar oo kala duwan si aad iPad. Raac talaabada macalimiin tallaabo oo qalad ah ma waxaad u tegi kartaa. Waxaad u baahan doontaa inaad xabsi ku jebin qalab macruufka aad la jailbreak Me.
1. Waxaad u baahan doontaa si loo soo dajiyo OpenSSH. Open Cydia, taaban nooca raadinta ee OpenSSH. Ku rakib app this reboot aad iPhone.
2. Waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer. Hubi in aadan horay u heysan Lugood orodka.
3. Markaas dejisan iyo rakibi internetka duck u Mac ama winSCP daaqado. Kaddibna waxaad u baahan doontaa in aad raacdo tallaabada xigta in ay gasho iPhone.
Server: Cinwaanka IP aad iPhone / iPad / iPod taabto. Settings Magaca -Wi-Fi ku qasbeysaa inuu Network
Hostname: Cinwaanka IP aad iPhone / iPad / iPod taabto. Dejinta Magaca -Wi-Fi ku qasbeysaa inuu Network
4. Next aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo frash-0.02.debfile ka link hoos ku qoran:
5. Waxaad tagtaa / var / xidid / hagaha Media iyo abuuro gal ah oo lagu magacaabo 'Cydia' ka dibna la abuuro file kale loo yaqaan 'auto rakibi' gudaha folder Cydia ah.
6. Copy file frash-0.02.deb ah oo geli galka 'auto rakibi'.
7. Hadda waxaad u baahan tahay in la bilaabi aad telefoon iyo aad tahay dhamaystiran. Waxaad isticmaali kartaa goobta kasta oo ku salaysan flash; kaliya aad u baahan tahay si ay u riix qoraalka flash ay ku ciyaaraan content flash ah.
Hubi in aad oo dhan ku jira telefoonka aad ku taageeray ka hor inta aadan soo dajiyo flash ku saabsan telefoonka. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay lumiyaan wixii macluumaad muhiim ah.
> Resource > Video > Sida loo rakib Flash on PC / Mac / Android / iPhone / iPad